Mombamomban’ny vehivavy iray mpanome vaovao an’i Kremlin · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Desambra 2019 9:59 GMT
Vakio amin'ny teny русский, বাংলা, Español, Français, polski, English
Sary novain'i Kevin Rothrock.
Namely indray ilay vondrona Rosiana amin'ny Aterineto izay fantatra amin'ny anarana hoe “Shaltaï Boltaï” (ary izay mitondra ny solonanarana hoe “Anonymous International”), ity indray mitoraka ity, mba hitazonana ny fampanantenany hamoaka vaovao manohintohina misimisy kokoa an'i Kristina Potouptchik, ilay mpitondrateny fahiny tao amin'ny Nachi , hetsika tanora mpomba an'i Kremlin, sy mpikambana iray amin'izao fotoana izao ao amin'ny Tranobe Sosialin'ny Federasiônan'i Rosia. Navoakan'ny Shaltaï Boltaï ny fisiana fifandraisana tamin'ny imailaka izay eritreretina ho nifanaovan'i Rtoa. Potouptchik sy ireo mpiasam-panjakana ao Kremlin, izay mampiseho fa tsy tapaka nanao tatitra izy mikasika ireo hetsika politikan'ireo blaogera malaza sy mpanao gazety tsy miankina.
Mirakitra lohahevitra maro ireny imailaka ireny, fa miresaka voalohany indrindra ireo mpanohitra tsy tia Poutine, ary koa ireo fironana politika lehibe eny amin'ny haino aman-jery sosialy sy ny fanaovangazety politika Rosiana.
Vao herinandro vitsy monja izay ny imailaka akaiky indrindra : tamin'ny 16 Desambra, noho ny antony tsy hay loatra, nanoratra tamin'ny anarana hoe Anna Veduta (sekretera fahiny mpifandray amin'ny gazety tao amin'ny lehiben'ny mpanohitra, Alexeï Navalny) i Ramatoa Potouptchik — mamintina ny toepo ankapobeny hita anatin'ny Aterineto Rosiana taorian'ny fitontonganan'ny vola “robla”. Nampitondrainy sasany tamin'ireo sary hatsikana nalaza indrindra tamin'izany andro izany ny tatitra nataony ary sintoniny ny saina hankamin'ireo hevitra mikasika ny olona manana ny mahaizy azy manokana, toy ny blaogera Maxim Katz sy ny lehiben'ny mpanohitra Boris Nemtsov.
Tao anatin'ireo tatitra nataony, tsy mijanona amin'ireo vaovao farany ao amin'ny aterineto sy ny haino aman-jery irery ihany i Ramatoa Potouptchik: manolotra làlana vaovao ho an'ireo hetsika fampielezankevitr'i Kremlin ihany koa izy. Manolotra fampielezankevitra isankarazany arindra amin'ny alalan'ny lahatsoratra am-bilaogy, bitsika, ary teny fanalahidy mihitsy aza izy. Tao anatin'io tatitra tamin'ny 16 Desambra io mikasika ireo fihetsehampon'ny RuNet nanoloana ny krizin'ny vola robla, tolokevitra nomeny ny hanitrikitrihana ny “lafiny ara-pihetseham-po” amin'ny toejavatra misy ankehitriny any Rosia:
Azo atao ihany koa ny manamafy ny lafiny ara-pihetsehampo. Ny tena mety dia ny manohana hoe vao mainka hanaratsy ny teodraharaha efa misy ny mikoropaka ary miampanga ny fitondrana ao amin'ny fireneny noho ny nanamorany ny fisian'ity toe-javatra ity. Amin'izay fotoana izay ihany, tokony ho tonga saina ilay ampahany tamin'ny vahoaka izay nanambara tamin'izany fotoana izany fa hoe vonona ny hiaritra amin'ny fanaisorana sasantsasany taorian'ny fakàna an'i “Crimée” hoe vokatry ny famoretana ataon'ny Tandrefana ireo fiovaovana miseho eo amin'ny tsenam-bola ireo, tsy faly noho ny maha-firenena tsy miankin-doha an'i Rosia izay “sahy” nijoro tamin'ny maha-mpitarika azy tany Eorazia ary nametraka ny heviny feno fiandrianana tamin'ny vondrom-piarahamonina iraisam-pirenena. Manoloana ireo zava-tsarotra ireo, tsy maintsy ialan'ny tsirairay amintsika ny fikoropahana ary tsy maintsy miasa, mianatra misimisy kokoa ary manao zavatra bebe kokoa ho an'ny fireneny. Ankoatr'izay, tsara ny mampahatsiahy fa tsy zazavao na vendrana ireo Rosiana mpitondra ary hatao araka izay haingana indrindra ny zavatra rehetra azo atao mba hamahana ilay krizy.
Ohatra tsy dia mahazatra tamin'ireo tatitra nataon'i Rtoa Potouptchik angamba ny fidinan'ny robla, indrindra noho ny hamafin'ny olana ara-toekarena any Rosia amin'izao fotoana izao. Manome hevitra amin'izay ho tokony asany mahazatra ilay imailaka iray tany amin'ny tapaky ny volana Febroary tany:
1. Nokarohanay nanerana ny blaogy sy Twitter momba ny lohahevitr'ireo tsikeran'i Chenderovitch sy ny Onjampeo “Akon'i Maosko”. Mikasika izany lohahevitra izany, nijery teny amin'ireo fironana Rosiana sy maneran-tany tamin'ny twitter izahay. tenifotra #RadioMatelas [mankany amin'ny fanalambaraka maizina ara-pananahana mahavoarohirohy ilay mpanonta lahatsoratra ao amin'ny Echo sy ilay olo-malaza any amin'ny fanoherana, Victor Chenderovitch].
2. Nokarohanay teny amin'ny blaogy sy Twitter ny lohahevitr'ireo tsikeran'ny antokon'i Navalny.
3. Tao amin'ny tranonkala iray mikasika ireo honohono manodidina ny Lalao Olaimpika tany Sotchi, tamin'ny teny Rosiana sy Anglisy, nandà finoanoam-poana 16 izahay mikasika ireo Lalao [izay nampiseho an'i Rosia ho toy ny mpikarakara vendrana]. Hita in-130.000 ilay dika amin'ny teny Rosiana avy amn'ilay tranonkala ary ny dika Anglisy, in-89.100. Nahatratra ny tampony tao amin'ny Livejournal ny lahatsoratra iray mikasika ilay tetikasa.
Efa nikendry an'i Rtoa Potouptchik ny Shaltaï Baltaï tamin'ny famoahana sariny izay nijoroany teo akaikinà valizy nisy vola mampiahiahy. Ankoatr'izay, nikendry azy tamin'ny 2013 ny Anonymous – lreo tena izy, fa tsy ilay solonanarana tsy misy idirany izay ampiasain'ny Shaltaï Boltaïl — tamin'ny famoahana ny rakitr'ireo imailakany ihany koa.